Mugwagwa Kuisa mucherechedzo Anobatsira Vagadziri | China Road Kumaka Yekubatsira Equipment Fekitori & Vatengesi
LXD Inosimudzira Mota (kuchovha-pane system)
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yemota inowedzera. Sei uchifamba iwe uchikwanisa kugara? Shandisa mota inosimudzira inobatanidza iyo yekumaka muchina, iko kushanda kwebasa kunovandudza 2-3 nguva.
LXD Pre-yekumaka Machine
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori eakafanogadzira mamaki michina. LXD pre-yekumaka muchina ndiwo mubatsiri muchina munzira yekumaka yekuvaka. Iyo inogona kumaka pre-yekumaka zvakasununguka zvinoenderana nezvinodiwa zvekuvaka kuti idzivise kutadza kwakashata. Iyo zvakare inogona kuita 1-3 mitsara yakazvimiririra, iyo inovandudza zvakanyanya kugona kwekuvaka.
LXD-II Priming Muchina
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yemamishini ekutanga. LXD-II priming muchina mutevedzeri wemidziyo yekumaka mugwagwa kuvaka.it yakagadzirirwa enjini peturu uye otomatiki mweya compressor, ine mukana wepamusoro-kugona, kusevha-kwevashandi, mashandiro ari nyore, nyore kugadzirisa, uye hupenyu hwakareba hwebasa.
LXD-II Yakakwira Yekumanikidza Mugwagwa Pamusoro Iridza Muchina
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yeinopisa-kumanikidza mugwagwa Surface Inoridza Machines. LXD-II mugwagwa pamusoro unovhuvhuta muchina ndiyo yekubatsira michina yemumigwagwa yekumaka kuvaka, iyo yainyanyo shandiswa kutsvaira mugwagwa pamusoro pamberi pekumaka chiratidzo.
Yakakwira Pressure Road Surface Sweeper
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yeakakwira-kumanikidza mugwagwa wepasi kutsvaira. Mugwagwa wekumaka zvishandiso zvekubatsira - mugwagwa pamusoro-wakamanikidza kutsvaira unonyanya kushandiswa kuchenesa simende irikubuda ropa, matope, kuwanda kwenzira, uye pendi inotonhora yekumaka mutsetse. Iyo yakagadzirirwa gadziriro yesimba iyo inogona kugadziridzwa zvinoenderana nemamiriro emugwagwa pamusoro.
LXD-II Yakakwira Yekudzvinyirira Road Pamusoro Kuvhuvhuta Uye Kutsvaira Zvese-mu-chimwe Muchina
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yeakakwira-kumanikidza mugwagwa pamusoro pekupurura tsvaira michina. Iyo inoshandiswa pakuchenesa simende iri kubuda ropa, madhaka, nekukurumidza ivhu kunze kwemugwagwa pamusoro. Izvo zvakare zvinogona kufuridzira kusachena uye guruva remugwagwa pamusoro. Iyo ine zvakanakira yekuvandudza mashandiro ekushanda uye inochengetedza vashandi.